ARDAA Xalqaddii 54aad: Taariikhda khilaafka Soomaaliya iyo Kenya. (dhegayso) – Radio Daljir
ARDAA Xalqaddii 54aad: Taariikhda khilaafka Soomaaliya iyo Kenya. (dhegayso)
Juunyo 17, 2019 10:00 b 0
Xalqadii 54aad ee Taxanayaasha ARDAA oo Todobaadkan ku saabsan Taariikhda khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.
Intii dhegaystayaa todobaadkii hore Barnaamijka ARDAA waxaan uga hadalnay muranka ka dhex oogan Soomalaiya iyo Keny kaasoo sida muuqata wajiyo dhawr ah leh, hase ahaatee ay ubuc u tahay xudduud badeedda labada waddan, taasoo timid kadib markii dawladda Kenya ay sheegatay qaybo ka mid ah biyaha Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa arrinkaasi mawqif adag ka istaagtay, doorbiddayna sharciyada caalammiga ah in lagu kala baxo, laguna xalliyo murankaasi, una tallaabisay dacwad dhigasho maxkamadda caalmiga ah ee caddaaladda ICJ loo yaqaan.
Kenya ayaa tallaabadaasi ay mugdi-gelisay filashadeedii xagga badda, rabtayna in si sulux ah labada waddan in ay wax ku xallistaan, kadibna wajiyo badan u samaysay khilaafkaasi, bilawdayna in ay carqaladayso cilaaqaadkii guud ee labada waddan, marna joojisayba xiriirkii duullamaasiyaadeed.
Haddaba Kenya Damaceeda xuduudda badeed xagga Soomaaliya ma ahan mid dhawaan curtay ama ay bilawday ku hamigeeda, hase ahaatee muddo sannado badan ah ayay arrinkaasi ku hawlanayd, uguna soo duurxushay dawlado kala dambeeyey oo Soomaaliya ah.
Faarax Maxamed Maxamud “ Bukhaari’ waa Qoraala ka faallooda siyaasadda, takhasusukiisuna yahay siyaasadda iyo ammuuraha caalamka, ahna daneeya cilmibaarista Geesta Afrka. Bukhaari dhawaan wuxuu daabacay maqaal la xiriira khilaafka Soomaaliya iyo Kenya, maqaalkaasi oo xogtiisa uu aruurinayey muddo labo bilood ah, uuna ku ebyey bilaw illaa dhammaad khilaafka xagga badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Barnaamijka ARDAA ee Radio Daljir ayaan ku soornay todobaadkaan ee hoos ka dhegayso.
ARDAA 112 Wararka 22991
Sidee uga socotaa gobolka Sanaag howlaha baasboor bixinta Soomaaliya? (dhegayso)
Tirada Ciidamada Somaliland ee dhagaxa lagu dilay oo ka badan toban qof (daawo)